Lovia kely - China Shandong Huaxin Electric Lafaoro
Izahay fanatitra bibidia isan-karazany ny lovia kely indrindra amin'ny fahaiza-manao 0.3ton ny 90ton, izahay koa lovia kely mpanamboatra mifototra amin'ny mpanjifa ny fepetra. 1.Product Description foundry lovia kely rehetra dia azo manify amin'ny maotera fivoriana fitaovana ho an'ny Powered fihodinan'ny. Ny hafainganam-pandeha fihodinan'ny mety ho mpanjifa hanitsy ny fepetra. Fampiharana ny Casting foundry lovia kely vy Hot lovia kely ho an'ny fanariana foundry fandidiana, rehefa avy horaisintsika, vy ranon-javatra teo anoloan'ny ao amin'ny lafaoro lehibe, ampitondray ho any amin'ny toerana fanariana modely haidiny amin'ny dri ...
Izahay fanatitra bibidia isan-karazany ny lovia kely indrindra amin'ny fahaiza-manao 0.3ton ny 90ton, izahay koa lovia kely mpanamboatra mifototra amin'ny mpanjifa ny fepetra.
Lovia kely foundry rehetra azo manify amin'ny maotera fivoriana fitaovana ho an'ny Powered fihodinan'ny. Ny hafainganam-pandeha fihodinan'ny mety ho mpanjifa hanitsy ny fepetra.
Fampiharana ny Casting foundry lovia kely
Hot vy lovia kely ho an'ny fanariana foundry fandidiana, rehefa avy horaisintsika, vy ranon-javatra teo anoloan'ny ao amin'ny lafaoro lehibe, ampitondray ho any amin'ny toerana fanariana modely haidiny amin'ny alalan'ny fiara mitondra fiara.
Lovia kely ny steelmaking fototra, foundry ao amin'ny misokatra fatana lafaoro lehibe, na ny mpanova memy vy anidina, nanarato teny miasa eo anatrehan'i fikasana.
Ny vy anidina lovia kely dia nizara ho roa-turbine fomba fifindran'ny Rotary sy mahitsy fitaovana fampitana-tena Fanidiana karazana karazany roa (1:72, 1 tahan'ny: 75) .Ny tena endri-javatra dia: Rotary foibe nanaovana Ara-dalàna, ny roa-dalana azo ahitsy tsara, fototra mba reset.Turbine roa karazana fomba fifindran'ny Rotary mandany roa-turbine lefitra fomba fifindran'ny, malama fifindran'ny, mety fandidiana, roa-fomba tsara consistency.Straight avy ny hidin-trano fifindran'ny lavaka fitaovana mandany karazana avo, avo roa heny ny fanaraha-maso ny haavon'ny friction, Fanidiana fampisehoana tena mahery, maivana tamin-kalalahana, dia afaka hatsipy amin'ny alalan'ny hery ivelany kely, miverina haingana, aza kowtow, ny fampiasana ny azo antoka sy azo antoka.
2. Feature ny nanarato lovia kely vy
1) .Reasonable mifidy ny fihodinan'ny foibe, mety miasa, dia afaka mainka hitombo fototra rehefa vita sady nasiany.
2) .Adopt kodiarana roa mpivady kankana transmission.Although orinasa mpamokatra entana fangatahana dia avo, fa malefaka fifindran'ny, fomba roa azo ahitsy.
3) .Enclosure na ny fanaka vy matevina lovia, ny ambany ao an-kitapo firafitry ny nanangana ny fitambaran'ny taper, sisiny ambany, welding telo fiantohana, izay nanomboka ny fanompoana ny fiainana, ary hiantohana ny fiarovana ny mpandraharaha.
3. Technical masontsivana
Ankapobeny Dimensions (MG)
Previous: fandoroana lehibe mirehitra jiro fiovana
Next: Pneumatic Lafaoro Building Machine